Inayiloni isiguqo nokuqina okuhle kakhulu nezakhiwo ezinhle kakhulu zemishini |
Inayiloni isiguqo nokuqina okuhle kakhulu nezakhiwo ezinhle kakhulu zemishini
Inayiloni isiguqo iba nobulukhuni obuphakeme, ukumelana okuphezulu kokuqina, ukumelana okugoba, amandla okuthelela nokwandiswa okuphezulu. Amandla ayo okucindezela aqhathaniswa nawensimbi, futhi amandla ayo okukhathala asezingeni elifanayo ne-cast iron ne-aluminium alloy. .
igama lomkhiqizo:Inqubo ye-Mc nylon slider:Injection molding / centrifugal casting / CNC machining
1.Ingavikela ubuso bepuleti lensimbi.
2 engasindi futhi kulula ukuyisusa. Ukwehliswa komsebenzi ngamandla Sithuthukile kochwepheshe bezobuchwepheshe nabanolwazi lokusekela ubuchwepheshe obenziwe ngokwezifiso zonke izinhlobo zokuthwala ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene.
Isingeniso: Izinto zenayiloni zaziwa ngamandla azo aphezulu, ukuqina okuphezulu, ukuzivumelanisa nezimo okuhle, ukuhamba kancane, ukugqoka ukumelana nokuqina kwamakhemikhali okuhle. Ngaphezu kwezici zezinto ezijwayelekile ze-nylon, i-MC nylon inesisindo esiphakeme samangqamuzana kanye ne-crystallinity ephezulu. Ngakho-ke, amandla ezakhiwo zomzimba nezomshini aphakeme izikhathi eziphindwe ka-1.5 kunaleyo yenayiloni ejwayelekile, futhi amandla emishini aphezulu. Ingasetshenziswa kumishini emikhulu. Kuyamelana nokugqoka nokuzithambisa. Impilo ye-MC inayiloni pulley iphindwe izikhathi ezi-4-5 ukuphakama kunaleyo yensimbi, insimbi kanye nama-pulleys. Ngaphandle kokulimaza okokuxhuma, ukwenza ama-crane pulleys, impilo emelana nokugqokwa kwentambo yocingo inganwetshwa izikhathi eziyishumi; ibanga lokushisa eliguquguqukayo lingasetshenziswa ebangeni le -40 ℃ -100 ℃ 5. Ingabamba ukudlidlizela, ingavelisi msindo, isebenze kahle, futhi inezici zokuzicisha. , Kuphephile ukusebenzisa
Inayiloni ye-MC njengamanje iyinto ekahle kunazo zonke yokufaka esikhundleni segolide elingenayo i-ayoni. Isetshenziswa kabanzi kumishini yobunjiniyela, amandla kagesi, uphethiloli, ezokumbiwa phansi, amalahle, insimbi, ukwenziwa kwephepha, ukwakhiwa, amachweba, iziphambano nezinye izimboni ukwenza ama-pulleys, ama-slider, amagiya ezikelemu, amagiya namakhaba. Izingxenye ezahlukahlukene ezinjenge-wheel bushings, ama-bush bush, izigubhu, izihlalo ze-valve, izindandatho zokusekela, ama-disc wokugaya, ama-pulleys akhokhelwayo, i-iron tower foundation amathempulethi amakhulu, njll.
Langaphambilini Isilayidi senayiloni sempilo ende yikhwalithi ephezulu futhi ihlala isikhathi eside
Olandelayo: ikhwalithi ephezulu ye-Nylon slider yohlobo lwemishini yokwakha